ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာဂိမ်း. SimCity BuildIt v1.3.4.26938 APK ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား + Data - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Android Application Android Games Games Phone Application ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာဂိမ်း. SimCity BuildIt v1.3.4.26938 APK ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား + Data
ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာဂိမ်း. SimCity BuildIt v1.3.4.26938 APK ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား + Data
Maung Pauk at 12:25:00 AM Android Application, Android Games, Games, Phone Application,
SimCity BuildIt v1.3.4.26938 APK + DATA
ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာကို ဝါသနာပါသူများအတွက် ဂိမ်းဆော့ရင် ဆောက်လုပ်ရေးပညာကိုပါရရှိနိုင်တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.. အရင်ကလည်း တင်ပေးခဲ့ဖူးတော့ ဒီ ဂိမ်းအကြောင်း သိပ်ပြောစရာမလိုလောက်ပါဘူး.. ဗားရှင်းသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ပိုက်ဆံအကန့်အသတ်မရှိ ခိုးပြီးသားပါ..
[ ဆောကျလုပျရေး အငျဂငျြနီယာကို ဝါသနာပါသူမြားအတှကျ ဂိမျးဆော့ရငျ ဆောကျလုပျရေးပညာကိုပါရရှိနိုငျတဲ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ.. အရငျကလညျး တငျပေးခဲ့ဖူးတော့ ဒီ ဂိမျးအကွောငျး သိပျပွောစရာမလိုလောကျပါဘူး.. ဗားရှငျးသဈထှကျလာလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ.. ပိုကျဆံအကနျ့အသတျမရှိ ခိုးပွီးသားပါ.. ]
SimCity BuildIt v1.3.4.26938 APK : 18.9 Mb
SimCity BuildIt v1.3.4.26938 DATA : 67.3 Mb
Blog Archive February (2) January (1) December (10) October (5) September (3) August (14) July (13) June (17) May (80) April (47) March (13) February (5) January (18) December (40) November (18) October (3) September (11) August (20) July (41) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (54) October (58) September (71) August (108) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (192) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (149) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)